Nlekota oru isiokwu Nkesa? | Martech Zone
Wednesday, April 20, 2011 Satọde, Satọdee 19, 2015 Douglas Karr
Ebe ọ bụ na njikarịcha nchọta ihe na-aga n'ihu na-akwụ ụgwọ maka ndị ahịa anyị, anyị na-agbasi mbọ ike ka ha bụrụ ndị a họọrọ nke ọma. Mgbe ị na-achọ ọkwá na okwu ole na ole, ọ mara mma ile anya ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe ndị ziri ezi… na-eji ngwa ọrụ dị ka Lablọ nyocha Ikike, ị nwere ike nyochaa ụbọchị kwa ụbọchị ogo. Anyị na-eme nke a maka ndị ahịa anyị niile.
Agbanyeghị, maka ụfọdụ ndị ahịa anyị nwere ọnụ ọgụgụ dị mkpa nke Keywords nke ha na-ahazi, anyị ga-ewepụta akụkọ sitere na ngwa ọrụ Semrush iji chọpụta isi okwu niile ha na-ahazi na ya ma nyochaa nkesa ha.
Ọ bụ ihe a na-ahụkarị maka saịtị dị elu ka ọkwá dị elu n'ọtụtụ isiokwu ma wee pụọ. Ebe nrụọrụ na-adịghị mma nọ n'ọkwá mgbịrịgba dị ka ị hụrụ n'elu, ebe imirikiti adịghị ebe dị nso na ibe. Ekwela na hyp si SEO ụmụ okorobịa na-ekwu okwu banyere peeji nke 1 ogo… ị ga-abanye na ndị top ohere mpere na peeji nke 1 ma ọ bụrụ na ị chọrọ n'ezie okporo ụzọ.
Ka anyị na ndị ahịa na-arụkọ ọrụ, anyị na-aga n'ihu inyocha usoro nkesa isiokwu ha iji hụ na usoro a na-esi n'aka nri gaa aka ekpe - ọ bụghị site n'aka ekpe gaa n'aka nri. Maka ụfọdụ ndị ahịa anyị nwere netwọkụ nkesa ọdịnaya buru ibu, anyị na-ahụ usoro ahụ na-agagharị na ntụpọ. Nke ahụ pụtara na nchịkọta nchịkọta maka saịtị ahụ na-aga n'ihu na-ada. Anyị ga-ekwu maka ihe enwere ike ịme iji gbanwee nke ahụ na ọkwa na - abịanụ - naanị m chọrọ iwebata ndị mmadụ na nkesa a.
Achọpụtara m na ọ na-atọ m ụtọ na saịtị na-abụkarị ndị otu dị ka nke a ma enweghị nkesa na-ekesa ebe niile. Anyị emeela nyocha a maka ọtụtụ ndị ahịa buru ibu ma na-enwekarị njikọ yiri nke a. Echere m na ọ bụghị ihe ijuanya nye ụfọdụ ndị ghọtara ya Algọridim Google ibe.
Tags: isiokwuisiokwu n'usoroisiokwu n'usoro nkesaisiokwu rankingsn'usoroogo njin ọchụchọseo isiokwuseo ogo